News - Aan aragno sida loo caajiso waa in loo sameeyaa
Aan aragno sida loo caajiso waa in loo sameeyaa
Saxnimada caajisku waa mid aad u saraysa, saxsanaanta cabirka caajiska wanaagsan wuxuu gaari karaa IT8 ~ IT7, aperture-ka waxaa lagu xakamayn karaa saxnaanta 0.01mm.Hadii ay caajis fiican tahay, saxsanaanta mashiinku wuxuu gaari karaa TT7-IT6, iyo tayada dusha sare caajis guud, dusha sare ee dusha sare ee Ra waa 1.6 ~ 0.8 m. Bal aan aragno sida loo caajiso.
Talaabooyin caajis ah iyo taxaddarro
Rakibaadda magaabay wiil caajis
Aad ayey muhiim u tahay in la rakibo qalabka shaqada caajiska ah ee ka shaqeynaya, gaar ahaan hagaajinta shaqada iyadoo la adeegsanayo mabda 'eccentric. Kadib rakibida aaladda caajiska ah, waa inay fiiro gaar ah u yeelato si loo fiirsado diyaaradda weyn ee daabaca ah ee qalabka caajiska ah, haddii ay la heer tahay isla heerka jihada quudinta ee madaxa qalabka caajiska ah? xaglaha mashiinada caadiga ah.
Qalab caajis isku day caajis
Qalabka caajisku waa inuu hagaajiyaa gunnada 0.3-0.5mm iyadoo loo eegayo shuruudaha habka wax soo saar, iyo dib u habaynta iyo godka caajisku waa inuu hagaajiyaa gunnada of0.5mm caajis xun iyadoo loo eegayo kaalmada godka hore. Gunnada caajisnimada xigta waa la damaanad qaadayaa.
Ka dib markii qalabka caajiska la rakibo oo la amaahiyo, waxaa lagama maarmaan ah in la tijaabiyo oo la hubiyo in khaladka qalabka caajisku uu buuxinayo shuruudaha caajiska xun.
Kahor caajis iyo makiinad, si taxaddar leh u hubi haddii qalabaynta, tixraaca meelaynta ee qaybta shaqada iyo walxaha meelayntu ay deggan yihiin oo lagu kalsoonaan karo.
Muxuu yahay dhexroorka daloolka hore ee lagu farsameynayo khaliifyada?
Hubi in saxsanaanta meelaynta soo noqnoqda iyo saxnaanta dheelitirka firfircoon ee qalabka (dunmiiqa) ay buuxinayaan shuruudaha mashiinka ka hor caajis.
Qiimaha firfircoon ee runout ee cuf isjiidka baarka caajiska ah waa in lagu hubiyaa habka jiifka loogu daro godka caajiska si loo yareeyo saameynta gariirka xiiriddu u dhexeeyso iyadoo wax laga badalayo xuduudaha goynta si macquul ah.
Marka loo eego caajiska xun, caajiska nus-ganaax ah, talaabooyinka caajiska wanaagsan ee si macquul ah loogu qaybiyo lakabka gunnada caajiska, gunnada caajis la'aanta ah ee ku saabsan 0.5mm ayaa ku habboon; Caajis wanaagsan, dhib yar oo caajis ah oo ku saabsan 0.15mm, si looga fogaado semi-ganaax margin caajis sababa margin aad u badan ha u gooyuhu u saameeyo saxnaanta hagaajinta margin caajis fiican.
Way adagtahay in la farsameeyo qalabka, caajis sax ah (dulqaad ≤0.02mm) waxay kordhin kartaa talaabooyinka farsamaynta caajiska wanaagsan, marinka caajiska ahi kama yarayo 0.05mm si looga fogaado mashiinka mashiinka gooyaa ee laastikada ah.
In geeddi-socodka qalab caajis on qalab, waa in fiiro gaar ah si looga fogaado in qalab caajiso qalab shaqeeya (daab iyo mindi block) iyo saamayn on block mindi, dhaawac ku daab iyo mindi block jeexdin si ay qalabka caajiska hagaajinta qiimaha beddelo waxay saameyn ku yeelanaysaa saxitaanka mashiinka furitaanka
In geeddi-socodka caajis, fiiro gaar ah si ay u sii qaboojinta ku filan, loo kordhiyo saamaynta saliidaynta qaybo ka mid ah qalabka si loo yareeyo xoog jarida.
Ka-qaadista Chip-ka ayaa si adag loogu fuliyaa tallaabo kasta oo wax-qabad ah si looga hortago ka-qaybgalka qalliinka goynta labaad si ay u saamayso saxsanaanta mashiinka muuqaalka iyo tayada dusha
Inta lagu guda jiro hawsha caajiska, hubi heerka abrasion-ka ee gooyaha (daab) waqti kasta, oo ku beddelo waqtigiisa si loo hubiyo tayada qalabka farsamada; Tallaabada caajisnimada wanaagsan waa ka mamnuuc in la beddelo daab si looga hortago khaladaadka; Tallaabo kasta oo ka mid ah ka shaqeynta ka dib, si adag u hirgeliyaan shuruudaha xakamaynta tayada nidaamka, si taxaddar leh u tijaabi mashiinka dhabta ah ee farsameynta oo samee rikoodh wanaagsan, si loo fududeeyo falanqaynta, hagaajinta iyo hagaajinta makiinadda caajiska ah